युरोप मा सबै भन्दा शानदार विश्वविद्यालयहरु | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > युरोप मा सबै भन्दा शानदार विश्वविद्यालयहरु
युरोप मा सबै भन्दा शानदार विश्वविद्यालयहरु लागि देख? त्यसपछि पढ्न! हामी थाहा विश्वविद्यालय छान्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विकल्प हो. को पाठ्यक्रम, एक विचार जो एक धाउन छनौट गर्दा विश्वविद्यालय प्रदान गर्दछ कि शिक्षा र सिक्ने सुविधाहरु लिनुपर्छ. तथापि, कहिलेकाहीं एक पेट भावना पनि मा जान राम्रो छ. यहाँ मा एक ट्रेन सेव हामी तपाईं को लागि यो अनुसन्धान केही गरेको र सूची संकलित छन् सबैभन्दा शानदार विश्वविद्यालयहरु. तिनीहरू सबै घमण्ड शानदार वास्तुकला. केही छ अचम्मको इतिहास, तर थप नव स्थापित विश्वविद्यालयहरु केही पनि यो सूची मा विशेष गर्दै. तिनीहरूले आधुनिकतावादी भवनहरु र एक थप समकालीन सौंदर्य प्रस्ताव कला सुविधाहरू. हामीलाई आफ्नो मनपर्ने के थाहा!
विश्वविद्यालय बोलोग्ना, इटाली
को विश्वविद्यालय बोलोग्ना को मा इटाली संसारको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय रूपमा मानिन्छ, मा स्थापित गरिएको होने 1088. यो सूची छ युरोप सबैभन्दा शानदार विश्वविद्यालयहरु, तर यो विचार गर्न सकिएन संसारको सबैभन्दा शानदार विश्वविद्यालयहरु मध्ये एक. को Palazzo Poggi छ तल तस्विरमा, विश्वविद्यालय को मुख्य भवन को एक. यो विश्वविद्यालय गरेको तीन घरहरुमा संग्रहालयहरु प्राकृतिक इतिहास प्रदर्शनियों संग, शरीर रचनाको विज्ञान, प्रसूति, भौतिक, र रसायन. हो, तपाईं सही पढ्न. तिनीहरूले आफ्नै संग्रहालयहरु छ!
तर तिनीहरूले बाहिर scoping जब तपाईं भ्रमण गर्नुपर्छ मात्र भवन छन् सबैभन्दा शानदार विश्वविद्यालयहरु. तपाईं धारण गर्नुपर्छ भनेर विश्वविद्यालय भित्र धेरै भवनहरु छन् तपाईंको अवश्य-यात्रा सूची. यी स्पेनका कलेज समावेश, एक गुलाबी, cloistered भवन यसको डिजाइन दुवै गोथिक र पुनर्जागरण तत्व शामिल. साथै उत्कृष्ट वास्तुकला रूपमा, विश्वविद्यालय 2-हेक्टर वनस्पति उद्यान घर छ.
कसरी ट्रेन द्वारा त्यहाँ प्राप्त गर्न?
कारण यसको केन्द्रिय स्थान र भूगोल गर्न, बोलोग्ना विकास गरिएको छ को को एक मा प्रमुख रेलवे परिवहन को हब उत्तरी इटाली. यसलाई अन्य प्रमुख इटालियन केन्द्र संग धेरै राम्रो-जोडिएको छ.
बोलोग्ना छ 37 फ्लोरेन्स देखि मिनेट
2-घंटा 20-मिनेट देखि रोम
2 बाट घण्टा भेनिस
1 फेरारा घण्टा
एक आधुनिक उच्च गतिको रेलवे लाइन लगभग मा मिलान पुगन अनुमति दिन्छ 65 मिनेट.
यो लाइन को अन्य शाखा रोम संग बोलोग्ना जडान.
साइड टिप्पणी: यस बेला लिइरहेको मिलान देखि दक्षिण तालिम, दक्षिण मा बोलोग्ना माथि बैठे को Duomo एक झलक फसाउन भूल छैन. यो छ विशेष गरी सूर्यास्त मा रोचक.
विश्वविद्यालय रोसटक, जर्मनी
को विश्वविद्यालय रोसटक को छैन केवल बाल्टिक सागर क्षेत्र मा सबै भन्दा पुराना विश्वविद्यालय छ; यो पनि परम्परा मा अमीर छ. र पाठ्यक्रम, युरोप मा सबै भन्दा शानदार विश्वविद्यालयहरु मध्ये एक. रूपमा स्थापित भएको थियो 1419, यसलाई चाँडै यसको 600th वार्षिकोत्सव मनाउन हुनेछ. यो शिक्षित को लामो परम्परा हेर्न फिर्ता विद्यार्थी र अनुसन्धान गरिरहेको. को गोथिक-शैली मिलाइएको भवन, रूख-लाइन पक्षको संग मिलेर र पार्क एक आश्चर्यजनक सेटिङ लागि बनाउन. विश्वविद्यालय को केन्द्र मा यो थप्दा हामीलाई सुरुमा आकर्षित जो आँखा तेतैतिर मुख्य भवन छ को सबैभन्दा शानदार विश्वविद्यालयहरु. यो छ पार्क र फोहरा विपरीत स्थित, को प्रशंसा केही समय खर्च गर्न विद्यार्थी र आगंतुकों लागि उत्तम ठाउँ निर्माण को धनी बाहिरी.
रोसटक को विश्वविद्यालय वैज्ञानिकहरू र विद्यार्थी सबै संकाय देखि चार प्रमुख क्षेत्रहरू अनुसन्धान गर्न सहयोग जसमा नौ परम्परागत संकाय र एक केन्द्रीय interdisciplinary संकाय हुन्छन्:
जीवन, प्रकाश, र फरक
व्यक्तिविशेष र समाज को वृद्ध
ज्ञान – संस्कृति – परिवर्तन
रोसटक को विश्वविद्यालय विषयहरू को एक धेरै व्यापक दायराभित्र जर्मन विश्वविद्यालयहरु मध्ये एक छ. यो भन्दा बढी प्रदान गर्दछ 100 पाठ्यक्रम: 34 एक संग समाप्त अविवाहित पुरुष, 56 एक मालिक डिग्री संग, 37 (शिक्षकहरू सहित) राज्य परीक्षा संग र3एक पीएच.डी संग. यसबाहेक, शिक्षक प्रशिक्षण र शैक्षिक अनुसन्धान को लागि केन्द्र मात्र होइन शैक्षिक अनुसन्धान सञ्चालन गर्छ तर पनि काम गर्दछ शिक्षक प्रशिक्षण गुणस्तर सुधार मा.
को को एक प्राप्त गर्न कसरी जान्न चाहनुहुन्छ सबैभन्दा शानदार विश्वविद्यालयहरु युरोप मा? Whichever निर्देशन तपाईं यात्रा बाट (जस्तै. रोसटक वा स्केविरिन, बर्लिन वा हैम्बर्ग), रेल लिन नगरेसम्म Wismar रेलवे स्टेशन पुग्न. यहाँबाट, तिमी सक्छौ बस समातेर यस जे-आर-जन Becher-Strasse मा लाइनहरु प्रयोग गरेर बस-स्टप गर्न4वा जी (Ostseeblick तिर) वा बी-डी (Seebad Wendorf तिर). यो मार्फत यो बस-स्टप मात्र एक मिनेट पैदल छ गाडी बिसाउने को परिसर गर्न.
(शहर बस मार्गहरू को नेटवर्क योजना लागि, तालिका र मूल्यहरू, कृपया भ्रमण Wismar को Hanseatic शहर वेबसाइट.
आरहूस विश्वविद्यालय, डेनमार्क युरोप मा हाम्रो अन्तिम शानदार विश्वविद्यालयहरु छ
आरहूस विश्वविद्यालय डेनमार्क दोस्रो-सबै भन्दा ठूलो शहर मा स्थित छ र यसको हरियो परिसर द्वारा विशेषता छ, संग पूरा ताल. विश्वविद्यालय कसरी मानिसले बनाएको संरचना र एक सिद्ध उदाहरण हो प्राकृतिक वातावरण सिद्ध अनुरूप काम गर्न सक्छन्. मुख्य भवन द्वारा प्रदर्शन, पूर्ण. को भवन को धेरै डेनिस architect द्वारा बनाइएका थिए C.F. विश्वविद्यालय को युवा झल्काउँछ कि एक आधुनिक डिजाइनमा Moller. Moller र आफ्नो साझेदार Kay Fisker र Povl Stegmann थिए पहेलो-ईटा भवन लागि जिम्मेवार. तिनीहरूले विश्वविद्यालय गर्न विशिष्ट साथै अद्वितीय छन्. मुख्य भवन देखि को एक मानिन्छ गरिएको छ 12 डेनिस इतिहास सबैभन्दा महत्वपूर्ण वास्तु काम. धेरै कारण मध्ये एक यो सबैभन्दा मध्ये एक छ शानदार विश्वविद्यालयहरु.
अधिक संग 44,000 विद्यार्थी, यो देश मा दोस्रो ठूलो विश्वविद्यालय हो. यो कला मा चार संकाय को comprises, विज्ञान र प्रविधि, स्वास्थ्य, र व्यापार र सामाजिक विज्ञान.
विश्वव्यापी orientated, विश्वविद्यालय मार्फत ठाउँमा विनिमय कार्यक्रम छ 50 विश्वव्यापी संस्थाहरू. यो विश्वविद्यालय आर्कटिक को समावेश, को युट्रेच्ट नेटवर्क, the Nordic Centre Fudan and the Nordic Centre India.
आरहूस डेनमार्क सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रेलवे जंक्शन को एक मा निहित. त्यहाँ उत्तर गर्न प्रतिघण्टा प्रस्थान छन्, दक्षिण, र पश्चिम. दक्षिणी र मध्य युरोप बाट, को जडानहरू हैम्बर्ग / Flensburg मार्फत छन्. हैम्बर्ग देखि आरहूस यात्रा समय लगभग पाँच घन्टा. पूर्वी युरोपेली देशहरूमा आरहूस गर्न जडानहरू तालिम देखि पोल्याण्ड र कोपेनहेगन मार्फत जाने. आरहूस र कोपेनहेगन देखि प्रतिघण्टा सेवाहरू छ. खोल्ने सुरुङ महान् बेल्ट अन्तर्गत छोटो छ यात्रा एक घण्टा द्वारा. यात्रा अब साढे तीन घन्टा लाग्छ. त्यहाँ स्वीडेन धेरै दैनिक जडानहरू, जर्मनी र युरोप को बाकी.
आरहूस रेलवे स्टेशन को लागि बाध्य गाडिहरु प्रतिघण्टा छोड्न कोपेनहेगन हवाई अड्डा. मूल्य DKK बारेमा छ 410 एक-तरिका टिकट को लागि (सहित सीट आरक्षण).
आफ्नो विकल्प समीक्षा सुरु गर्न तयार? जबकि न्यानो मौसम रहन्छ एक रेल टिकट बुक, को मद्दतले एक ट्रेन सेव!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “युरोप मा सबै भन्दा शानदार विश्वविद्यालयहरु” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/spectacular-universities-europe/- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)